Zimbabwe – Page 2 – The Asian Post
HARARE: After running them close two nights ago, UAE were put through another tough examination in Harare. Zimbabwe’s quality of batsmanship was far superior, as they clinched the four-match ODI series 3-0 with one to play. This was made possible courtesy Sean Williams’ third ODI century, an unbeaten 84-ball 109, ...
HARARE: Afghanistan’s proposed tour of Zimbabwe for five one-day international matches next month has been cancelled because of broadcast costs, Zimbabwe Cricket (ZC) said. The Afghanistan Cricket Board (ACB) had asked Zimbabwe Cricket to host the series in Harare to help their team prepare for the World Cup in England. ...
LUSAKA: A Zambian airline on announced that it will suspend flights between the capitals of Zambia and Zimbabwe. Proflight Zambia said the suspension will begin on Jan. 29, 2019 and it expects to resume flights from March 1, 2019. “We regret to announce that due to the current situation in ...